Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, Axad: “Faransiiska inaynu wax kala iibsanaa waa daruuri laakiin maalin kaliya wax laguma kala iibsado”
September 29th, 2008 Comments Off Hargeysa (Ogaal) – Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin iyo Wefti uu hogaaminayo ayaa shalay galinkii dambe dalka ku soo laabtay, ka dib markii ay soo dhamaysteen safar ay ku soo mareen wadamo dhawr ah oo ka mid ah qaarada Yurub.
Madaxweyneha oo ay Madaarka Hargeysa ku soo dhaweeyeen Madaxweyne Ku-xigeenka, Golihiisa Wasiirada, Xildhibaanada labada Gole Baarlamaan, Cutubyo ka tirsan Ciidamada Qaranka iyo dadweyne kale, waxa uu ka waramay waxyaabaha u soo qabsoomay iyo rejada uu kala yimi meelihii uu soo maray. “Faransiiska waxaanu la kulanay lataliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Afrika oo muhiim ah oo aanay wadamada kale ee Yurub aanay lahayn, kaas oo ah nin awood gaara leh oo aanu kula kulanay Madaxtooyada Faransiiska lafteeda. Waxaanu iska waraysanay xaalada mandaqada iyo Faransiisku waxa uu inala qaban karo. Waxaan u arkay kulankayagaas runtii way ogolaayeen qolada Faransiisku in ay wax inala qabtaan. Waxa kale oo aanu la kulanay nin u qaabilsan Faransiiska Arrimaha Afrika iyo Indiyan Ooshinka, falanqayn badan ayaananu ka wada galay xaga budhcad-badeeda iyo Faransiisku muxuu inala qaban karaa.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweyne Rayaale. Isla markaana waxa uu sheegay in Faransiisku uu balan qaaday in uu gacan ka gasanayo dhinaca kobcinta dhaqaalaha Somaliland. “Faransiisku waxa uu balan qaaday xaga dhaqaalaha maadaama uu Midawga Yurub Guddoomiye ka yahay sidii wax la inooga tari lahaa ee gacan la inooga siin lahaa, weliba waxyaabaha kale ee aanu Faransiiska ka wada hadalay waxa ka mid ahaa. Had iyo jeer Soomaaliya ayaa la inagu xidhiidhiyaa oo iyada oo wixii aynu lahayn iyada la wada siiyay hadana dambiyada Soomaaliya ayaa la inagu wada qoraa, oo la inama kala saaro marka uu caalamku taa xisaabinayo, taana hoos ayaanu ugala hadalay Faransiiska, waanu balan qaaday in uu labadeena gaar inoo kala qaadayo.”
Madaxweyne Daahir Rayaale waxa uu sheegay markii uu ka gudbay in uu Jarmalka caafimaad u joogay muddo laba maalmood ah, ka dibna uu u amba baxay Ingiriiska. “Ingiriiska hawl muhiim ah ayaan u tagay, waatan Baddii cakiran ee Budhcad badeedu ay ku badatay, dhibaatada ka jirtaana waxa weeyaan in Maraakiibtii la yidhaahdo Soomaaliya lama tagi karo IMO waanu la kulanay, waxaanu kala hadalnay in inaga iyo Koonfurta Soomaaliya laba la inoo kala arko, waxaanad moodaa in ay dadkani inta badan ku shaqeeyaan go’aano UN-ta ka soo baxa oo Soomaaliyana meel ay ku taalo aanay garanayn.” Ayuu yidhi Daahir Rayaale Kaahin, waxaanu ku dooday in tagista iyo kulamada ay la yeesheen ururada ka hawlgala marinada Badu ay fursad u tahay kala ogaanshaha Soomaaliya iyo Somaliland, isaga oo intaa ku daray in ay la kulmeen dad u olloleeya qadiyada Somaliland. Madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegay in dalka Itoobiya oo uu Jimcihii yimi, isla markaana uu la kulmay Wasiiru-dawlaha arrimaha Afrika, kaas oo uu sheegay in ay iska xogwaraysteen xaaladaha Geeska, waxaanu xusay in uu si gaar ah mar ugu noqon doono Itoobiya.
Warbixintaa kooban ka dib Madaxweynaha waxay wariyayaashu waydiiyeen su’aalo la xidhiidha Safarkiisa iyo kuwa kale, su’aalahaas iyo jawaabihii uu ka bixiyayna waxa ay u dhaceen sedan:
S: Dagaalkan caalamiga ah ee argagixisada lagula jiro Somaliland kaalin wayn ayay ka qaadatay, oo taa shaki kuma jiro, waxaanay ku darsatay tii Budhcad badeeda oo qaar badan oo la qabtay waa la xukumay. Dunidu waxa weeye hoo oo I sii oo kaalmahaas dalalka ka hawl-gala wax bay taraan. Markaa, siyaasiyan, dhaqaale ahaan iyo difaac ahaan maxaa faa’iido ah ee Somaliland ka soo galay?
J: Horta aduunkan aan ku noolahay waxyaabo badan siyaabaha aynu u haysano uma jiraan, matalan hadaynu u haysano inaynu inagu wax badan oo badan oo fiican qabsanay, inaka ayaa qabsanay, taa waxba la inagu siin maayo. Laakiin, waa lagama maarmaan in aynu abuurno dano (interest) dadyawgaa inaga dhaxayn kara oo aynu wada qabsan karno. Waa ka mid hadaanu ka qayb-galo dagaalka Budhcad-badeedka oo aan qaybteena ka dagaalano, waxyaabaha danaha inoo abuuraya ayaanay ka mid yihiin.
Faransiiska oo kale runtii waxaan odhan karaa iyaga ayaa ugu geesisan oo la dagaalamayba, qolyaha kale way agjoog-joogaan baan odhan karaa. Qolyahaa waxa inooga iman doona Wufuud Faransiiska, haddii Illaahay yidhaahdo Mustaqbalka, wakhtiga imika ma sheegayo. Golaha Odayaasha ee Faransiiskana waanu la kulanay, waxyaabo badan ayaanu kala hadalnay, inay meelo badan inooga hadlaan oo ay gacan inaga siiyaan iyaguna waxa ay qaban karaan inala qabtaan. Markaa danaysigaasi waa waxyaabaha socda, marka laguu baahdo ayaa lagu ogaanayaa ee hadaan laguu baahan ciddi ku ogaanmayso.
S: Madaxweyne, socdaalo hore ayaad Maraykan, Yurub iyo Afrikaba ku tagtay, meesha cusub ee aad doorkan tagtay waxa ay ahayd Faransiiska. Markaa Faransiisku muxuu kaga duwanaa wadamadaa hore ee kulamadii aad la yeelatay Madaxda Faransiiska kaaga dhex muuqday?
J: Ta Faransiisku waxa ay kaga duwan tahay ayaan odhan karaa, horta Safaaraddii Faransiisku way inoo fureen, oo awal halkaa kumaynaan lahayn, si gaar ah ayaanay inoogu fureen. Weliba waxa laga yaabaa in Safaaradda halkaa aynu ka furnay in ay muuqaal ka duwan meelaha kale ee ay inooga furan yihiin. Laakiin wakhtigeeda ayaan u daynayaa oo in aan ka hordhaco diyaar uma ihi wakhtigan.
S: Waxa jira baryahan dambe warar soo noqnoqonaya oo sheegay in Shaqada Wasaaradda Arrimaha dibadu ay u badan tahay Wasiirka oo kaliya, oo Xafiisyada Wakiillada wadama oo kale shaqadoodi aanay sidii hore ahayn. Markaa Adigu miyaad la dhacsan tahay Shaqada Wasaaradda Arrimaha Dibada, mid Xafiis Goboleed iyo mid Wasiirba?
J: Wallaahi, Wasiirku waa ku roonyahay ayaan aaminsanahay shaqadiisa, balaayo wayn oo ka jirtaana ma jirto.
S: Waxa la shaaciyay intii aad maqnayd in Madaxweynaha dalka Kiiniya marti-qaad kuu fidiyay. Markaa marti-qaadkaa ma tagaysaa, goorma ayaadse tagaysaa?
J: Marka uu si gaar ah iigu soo diray ayaan tagi doonaa haddii Illaahay yidhaahdo, horena waaban u tagay.
S: Madaxweyna, waxa jira Wakiillo wadama dibada, badiba dadka reer Somaliland ee qurba-jooga ah iyo qaar ka mid ah dadka halkan joogaa waxa ay dhaliilaan dhaq-dhaqaaqooda shaqo iyo doorka ay ka qaadanayaan Ictiraafka Somaliland, in badana xogogaal ayaa u tahay oo waad booqatay wadamadaasi. Shaqadooda sideed u aragtaa mase ka wada-hadasheen haday wax ka bedal u baahan tahay iyo haddii kaleba?
J: Horta qolada Wakiillada eedaynaysaa in ay iyagu wax la qabtaan ayay ahayd, iyaga ayaa dhulkaa degan, ninka meesha jooga dhaqaale badan anagu uma hayno ee tabaruc ayuu ku shaqeeyaa, intay dhaliilayaan in ay iyagu wax la qabtaan ayay ahayd. Qurba jooguna kala duwanaansheheena Xisbiyada ee halkan ayay ku dhex milmaan, Anigu fariinta kaliya ee maalin kasta oo aan tago u sheegaa waxa weeye qadiyada Somaliland mid u ahaada ayaan u sheegaa run ahaantii, waana waxa kaliya ee ay ku wada shaqayn karaan, oo haday ku wada shaqeeyaana ay wax badan qaban karaan. Qof meel kaligii jooga oo aan haysan adeeg badan, oo aan haysan dhaqaale badan bulshadeena halkaa (qurbaha) joogta ayaa looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan. Markaa waxaan qabaa haday qoladaasi (qurba-joogu) dhaliilayso dhaliisha iyaga ayaa inta badan yeelanaya.
S: Marka laga yimaado dhaqaalah, waxa ugu weyn ee ay Somaliland u baahan tahay waxa weeye Ictiraafka raadinta, Safaro badan ayaad Adiga iyo Xukuumadduba ku tagteen Yurub iyo Maraykanka, waxaanay dalalkaasi qadiyadeena u soo riixaan xaga Midawga Afrika. Markaa ma la odhan karaa siyaasadeenii dhinicii Afrika way ka gaabisay oo waxay ku soof daran habawday Yurub oo kaliya?
J: Horta marka u horeysa Afrikana maynu dayicin ee illaa Galbeedka (West) Afrika illaa Bariga (East) Afrika Aniga ayaaba socday oo Afrika laftigeeda albaabadeeda waanu garacaynaa. Hadaan imika dib kuugu noqdo Wasiirkeena Khaarajigu waxa laga yaabaa inuu dhawaan dal Afrika ah tago marka uu tago ayaanad ogaan doontaan oo imika kama waramayo, qaar Afrikaan ah oo qadiyadeena iibinaya inaanu Ingiriiska ku aragnay ayaa suuragal ah. Markaa inaga waxa la ina saaray in aynu albaab kasta garaacno, bahasha si sahlan lagu heli maayo, barigii hore ayaynu si hadyad ah oo sahlan u dhiibnay. Markaa hawl badan ayay inagu qaadanaysaa inaynu soo celino. Markaa albaab kasta oo Yuruba, oo Afrikaan ah iyo Maraykan inaynu garaacno waa waajib ina saaran.
S: Waxa la sheegay in Faransiisa oo aad tagtay, labadii hawl-gal ee uu ku soo furtay Maraakiibtii Budhcad-badeedu haysatay uu u isticmaalay Dekada Berbera. Markaa maxaynu faa’iido ka helay hawl-galadaa Dekadeena loo isticmaalay ee aad kala hadashay Faransiiska?
J: Faransiiska in aynu wax kala iibsano waa daruuri, laakiin maalin kaliya wax laguma kala iibsado. Haddaad maalin iyo laba adigu gacan gaysato way iska iman doontaa faa’iidadu. Markaa yaan la deg-degin ayan odhan lahaa.
S: Madaxweyne amba-baxaagii Saxaafaddu waxay tabisay in soo noqotkaaga aad ka soo degi doontid Magaaladda Burco, taasina dadka reer Burco ayay aad u soo jiidatay. Markaa taasi ma jirtay, goormaadse Burco tagaysaa?
J: Maya ee warkaasi waa kii aynu ku dari jirnay ayaan u malaynayaa, ee taasi ma jirin markaan runta kuu sheego, laakiin Burco waa magaalooyinkii dalka, maalin aan ka degi doonaana way jirtaa haddii Illaahay yidhaahdo.
S: Tababarro shaqaale oo tira badan ayay aduunweynuhu bixiyaan, oo weliba ay siiyaan wadamada soo koraya ee Afrika ay ka mid tahay. Somaliland maxaad beesha caalamka ugu bandhigi wayday in tababarro shaqaale la siiyo?
J: Horta wax badani way socdaan ee yaynaan ka hortagin. Somaliland waxaan idiin sheegayaa dedaalka aynu wadno shacab iyo xukuumadba ma dha-dhawin ayaan odhan karaa, wax badan oo soo socda iyo wadamo badan oo shalay aragtidoodii iska soo bedalaya ayaa jira, oo diyaar u ah Somaliland wixii shalay ay tarayeen wax ka badan in ay taraan. Safarada aan soo maray waan ku soo arkay, laakiin wuxu ilaa ay midha dhalaan in aanu ka sii warano diyaar uma nihin, illaa Afrika qadiyadii Somaliland iyo Soomaaliya sidii ay u arkayeen wax badan ayaa iska bedalayo, laakiin uma baahna inaynu mararka qaarkood wax badan ka sii hor degno.
S: Waxaad tahay Madaxweynihii Somaliland, balse waxa aad tahay hogaamiyihii Xisbiga UDUB, waxaana jira in Xisbigii Kulmiye ee loolanka adag idinkula jiray uu khilaaf soo kala dhexgalay. Markaa Adigu siyaasad ahaan side ayaad u aragtaa?
J: Anigu waxaan kula talin lahaa Xisbi waliba sharci ayuu leeyahaye inay waxooda hoos u dhamaystaan ayaan kula talin lahaa run ahaantii, inay is khilaafaana waan ka xumahay oo inay heshiiyaan ayaan jecelahay.
S: Waxaad sheegtay intii aad dalka ka maqnayd in Adiga iyo Madaxweyne Ku-xigeenku-ba aad isa soo sharaxaysiin mar kale. Hadaba, shirweynihii UDUB goorma ayaa la qabanayaa?
J: Waad ogaan doontaan (Shirweynaha) markaan qabanayo.
Somalia: Maraykanka oo looga shakiyay inuu ku lug leey